मस्कोमा डेलिभरी "एटलस मिरकल" - फुलहरू अर्डर गर्नुहोस्
२ 5939 XNUMX ₽ गुलाब गुलदस्ता
लिलीको गुलदस्तामा एउटा विशेष अपील र अनुग्रह हुन्छ। सबैभन्दा परिष्कृत व्यक्तिहरूका लागि!
२ 9476 XNUMX ₽ सेतो लिलीको गुलदस्ता
ताजा फूलहरूको विशाल वर्गीकरणमध्ये, गुलाबहरू सबैभन्दा प्रिय र चाहिएको छ। कुनै अन्य प्रकार र प्रजातिहरू उनीहरूसँग र colors्ग, आकार, आकार र अरोमाको विविधतामा तुलना गर्न सकिँदैन। गुलाब संग गुलदस्ता - सबैभन्दा लोकप्रिय रचना !!!
२ 5569 XNUMX ₽ दुई bablz
२ 6369 XNUMX ₽ शुभ बिहान
अर्किडहरू विशेष फूलहरू हुन् जो विशेष गरी कमजोर र कोमल हुन्छन्। एउटा अर्किड पनि सुन्दर देखिन्छ, र सम्पूर्ण गुलदस्ता स्वर्गीय सौन्दर्य र महिमाको वास्तविक सांद्रता हो। तपाईंको प्रिय व्यक्ति सुन्दर डेन्ड्रोबियम अर्किडहरू समावेश भएको एक शानदार फूल व्यवस्थाको साथ प्रस्तुत गर्नुहोस्।
२ 3783 XNUMX ₽ Dendrobium आर्किड।
मसलाकोटीस p पीसी।, गुलदस्ता र कम्पोजिशन डेकोर, कपास p पीसी।, ड्राई लैभेंडर (गुच्छा) २ पीसी।
२ 11680 XNUMX ₽ गुलदस्ता "कपास"
२ 4533 XNUMX ₽ अर्किड डेन्ड्रोबियम।